Ejipta: Hevitra Mifamahofaho Momba Ny Tolo-dalàna Fandraràna Ny Resa-betaveta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Marsa 2012 1:07 GMT
Adihevitra sy fifanoheran-kevitra no manozongozona sahady ilay parlemanta Ejiptiana voafidy vao haingana teo, iray volana monja taorian'ny fianianan'ireo mpikambana ao. Na ny tontolon'ny bilaogy na ny ao amin'ny Twitter Ejiptiana dia samy mibanjina avokoa ilay parlemanta vaovao, mibitsika ny fangatahan-dry zareo, ny ahiahy sy ny esoeso eo ambanin'ny tenifototra #EgyParliament. Ny fivoriana vao haingana nataon'ny parlemanta dia niteraka fifanakalozan-dresaka be mihitsy, saingy tamin'ity indray mitoraka ity dia nikasika ny resa-betaveta!
Fangatahana iray hisianà fanadihadiana hanakànana ireo tranonkalam-betaveta no napetraky ny mpikambana iray ao amin'ny parlemanta, avy amin'ny antoko Al-Nour. Ny antoko salafista Al Nour dia fantatra amin'ny fandikàny ny foto-pinoana Silamo amin'ny fomba fijery fatra-pandàla ny nentin-drazana. Avy hatrany ilay fangatahana dia voatsenan'ny fanehoan-kevitra samihafa teny anivon'ireo tranonkala media sosialy . Alyaa Gad, Ejiptiana iray monina any Soisa, mpitsabo miasa tena sy malalaka fisaina dia nandroso ny tenifototra #EgyPornBan mba hiresahana momba ilay olana [ar]
Arosoko ny tenifototra #EgyPornBan amin'izay ianareo mba afaka manolotra hevitra ho an'ny parlemanta momba ity lohahevitra manan-danja eo amin'ny fiainan'ny firenena izay efa mila ho fain'ny hanoanana ity.
Maro amin'ireo fanamarihana voaangona manodidina ilay tolo-dalàna hanakanana ny resa-betaveta no mahatsikaiky sy maneso. Indro ny fantina avy ao amin'ny Twitter.
Galal Amr manolotra hoe :
@GalalAmrG: #EgyPornBan? Avelao mba hanomboka ny fisintonana e!
Ahmed Essam manampy hoe :
Tena manohana mafy an'ity fanapahan-kevitra ity aho. Efa fotoana izao hidirana amin'ny fanaovana fampiharana izay nianarantsika nandritra ny taona maro !
Ary Gauchiste mampitahotra hoe [ar]:
Mianiana aho fa raha manakatona tranokalam-betaveta ianareo, hataoko printy ireo sary vetaveta ary hahantoko eny an-dalana!
Raha i Mohammed Gohary mivazivazy hoe [ar]:
Efa tena teo an-tokonan'ny hahazo ny fandresena ho ny firenena mijery be indrindra ny resa-betaveta isika, ary efa saika nahazo ny laharam-boninahitra erantany. Marina mafy, tena misy olona tsy te-hahita ity firenena ity handroso mihitsy an !
Bitsika hafa no miezaka manome fomba fijery mba manaraka ny tokony ho izy sy manazava ny antony anoheran-dry zareo ny hetsika toy izany. Anatin'izy ireny, i Ahmed El Saeed izay misaina hoe [ar]:
Alohan'ny handrarànareo ny resa-betaveta, sakano aloha ny tanora tsy hila azy ireny. Ampianaro ry zareo, itadiavo asa izy ireny, omeo vady ary ampio hampiasa ny fotoanany amin-javatra mahasoa.
Wael Eskandar manome ny hoe:
@weskandar: Ny #Egypornban dia endrika isehoan'ny fihatsarambelatsihy. Misy ny olona izay tsy afaka misaina mahitsty. Fomba ahoana no ahafahan'izy ireny mitantana firenena iray ? #egypt
And Rasha mampitandrina hoe [ar]:
Androany, avelantsika ry zareo hanakatona ny tranonkalam-betaveta, rahampitso dia ireo tambajotra sosialy, ary ny andro manaraka izay dia ireo tranonkala-baovao.
Tsy mila ny resa-betaveta!
Na dia eo aza ny fandraràna saika ho avy amin'ny rehetra mihitsy ao amin'ny Twitter, hafa ny sary ao amin'ny Facebook, satria nisy vondrona iray misalotra anarana hoe Fanentanana iray Hanakanana ny Tranonkalam-betaveta Ao Ejipta ary nahasarika mpikambana efa maherin'ny 15.000. Pejy iray hafa antsoina hoe “Tianay horaràna ireo tranonkalam-betaveta ao Ejipta” no napetraka tamin'ny Febroary 2011 ary toa efa nahazo mpankafy maherin'ny 43.000.
Bilaogy vitsivitsy ihany koa no nirotsaka mandray anjara amin'ilay adihevitra momba ny resa-betaveta, toa an'ilay bilaogera Mina Naguib nanoratra lahatsoratra iray nomeny lohateny hoe “Vetaveta,Fahalalahana, ary Fitoviana ara-tsosialy” anatinà fanaovana sary an-tsaina miharo eso amin'ilay “Mofo, Fahlalahana, ary Fitoviana ara-tsosialy”, iray amin'ireo hiaka malaza nandritra ny revolisionan'ny #Jan25 . Mina dia nanontany tena hoe [ar]:
Fantatr'ireo mpikambana ao amin'ny parlemanta ireo ve hoe hatraiza no fihanaky ny kolikoly, vono olona, fampijaliana, teritery, tsindry aloka, fahantrana, hanoanana, tsy fandriam-pahalemana sy tsy fisian'ny fikarakaràna ara-pahasalamana ka mahatonga an-dry zareo hanao ny resa-betaveta ho iray amin'ireo laharam-pahamehany? Fantatr'ireo mpikambana ao amin'ny parlkemanta ve fa ny isan-jaton'ireo mijery vetaveta anie ka tsy hihoatra velively ny an'ireo izay miaina ambanin'ny tsipika fetran'ny fahantrana ? Fantany ve fa vola an-davitrisa isan-taona no laniana any Shina, Arabia Saodita, Iran , Emira Arabo Mitambatra mba hanakatonana tranonkala izay mamoaka vaovao “manelingelina” ny fitondràna?
Vao iray monja amin'ireo adihevitra marobe miainga ao amin'ny parlemanta Ejiptiana ny resaka fandraràna ny resa-betaveta. Maro ireo zava-manahirana mbola mety tsy maintsy ho arahana!